Fitaovana nilona shina ho an'ny orinasa mpanamboatra milina | H & F.nylon
Ny fitaovan'nylon, ho tombony ho an'ny lanjany maivana, mora hajanona, fanoherana tsara ny abrasion, fiainana fampiasana lava kokoa. Ny fiarovana ny ampahany amin'ny stell, dia nampiasaina tamin'ny indostrian'ny injeniera efa ho telopolo taona izao, ary ny haben'ny tsenany dia nitombo tato ho ato noho ny vidiny ambany sy ny loto ambany amin'ny tontolo iainana.
Ny fitaovana nilona dia ampiharina amin'ny milina indrindra ao anatin'izany ny milina rehetra. Ny fitaovana nilona dia azo ampiasaina amin'ny milina fanoratana handefasana herinaratra. Ny fampiharana ny fitaovana nilona dia afaka miaro ny vy vy satria miara-miasa izy ireo handefa herinaratra handroahana ny masinina manontolo. Ny fampiharana ny pulley nylon dia misy fanosorana tena eo amin'ny faritra mampifandray, ny toe-javatra miasa mangina kokoa, ny vidin'ny famokarana ambany kokoa, ny fotoana serivisy lava ary ny vidiny ambany kokoa amin'ny fikojakojana taty aoriana. Tamin'ny taona lasa, fantatry ny injeniera fa ny metaly ihany no azo alefa, rehefa manomboka mamorona fitaovana vaovao, dia manomboka manintona ny mason'ny olona ny vokatra nylon. Ny ampahany nylon hatramin'ny voalohany dia ampiharina amin'ny indostrian'ny crane ary ny taty aoriana dia nampiasaina tamin'ny indostria hafa mba hanatsarana ny fahombiazan'ny milina iray manontolo.
Amin'ny fampiroboroboana ny toekarena manerantany, ny kitapo nylon dia nandrakotra ny anjaran'ny tsena marobe izay azo tamin'ny alàlan'ny vy vy. Fantatry ny olona fa ny gir nylon dia manolo ny vy vy amin'ny indostria no fironana. Amin'izao fotoana izao dia mety tsy hahatratra ny antsasaky ny vy vy ny fampiasana ny nify, fa amin'ny ho avy tsy ho ela, dia azo antoka fa hahatratra ny fampiasana ny vy ny vy ary ny fotoana farany avelany any aoriana.
Izahay huafu dia nirotsaka tamin'ny fampiroboroboana ny mpanjifantsika rehetra hampiasa ny fitaovana nilona amin'ny famokarana, Ary mino izahay fa ny fampiasana ny girela nilona dia hitombo be kokoa amin'ny taona manaraka.
Previous: nylon pulley natao ho an'ny ascenseur
Manaraka: Ny fehikibo fehin-kibo nylon vita amin'ny sinoa
Girona Pinion Gears
Geary plastika nylon
Slider nylon cusomerized